KhabarSamachar | देउवाको घरमा कांग्रेस बैठक राखेकोमा प्रकाशमानको असन्तुष्टि : बुढानीलकण्ठ हामीले नदेखेको हो र !
देउवाको घरमा कांग्रेस बैठक राखेकोमा प्रकाशमानको असन्तुष्टि : बुढानीलकण्ठ हामीले नदेखेको हो र !
२०७८ कार्तिक २९, सोमबार १४:२६
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको बैठक सभापतिको घरमा राखेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति, काठमाडौंले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले बूढानीलकण्ठ नदेखे झैं गरेर सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बैठक राखिएको टिप्पणी गरे । ‘पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टी सभापतिको घरमा राख्छ । कार्यालयमा राख्नु पर्‍यो नि’ उनले भने, ‘बूढानीलकण्ठ हामीले नदेखेको हो र । उहाँको त्यहा घर बन्नुभन्दा अघि नै हामी त्यहाँ बुढानीलकण्ठ भगवानको पूजा गर्न जान्थ्यौं नि ।’पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक सभापतिको घरमा राखिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा राख्नुपर्‍यो नि,’ काठमाडौं महानगरका नवनिर्वाचित पार्टी समितिलाई बधाई ज्ञापन गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा सिंहले भने, ‘पार्टी कार्यालय भवन के काम? बूढानिलकण्ठ नदेखेको हो र? उहाँ (देउवा) को घर बन्नुअगाडि देखि नै बुढानिलकण्ठ भगवानलाई प्रार्थना गर्न जान्थ्यौं।’
उनले क्रियाशील सदस्यतामा देखिएका समस्या नेतृत्वले समाधान नगर्दा ११६ दिनदेखि रौतहट कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयमा धर्नामा बसेको पनि बताए।क्रियाशील सदस्यता विवादलाई लिएर रौतहटका नेता कार्यकर्ता लामो समयदेखि पार्टी कार्यालयमा धर्ना बसेको भन्दै उनले भने, ‘जुन जिल्ला, जुन क्षेत्रको जुन वडाको जहाँ प्रोबलम छ । विधि र नियम अनुसार सम्बोधन गर्न प्रयास गरौं ।’
पार्टी प्रवेश, समायोजनको नाममा आफू अनुकुल नाम राखेपछि प्रदेश २ मा विवाद भएको उनले बताए ।
पार्टी सभापतिको गृहजिल्ला डडेलधुरामा के भयो भन्ने सबैले देखेको भन्दै उनले भने, ‘सत्तामा छु भन्दैमा पुलिसको घेरामा राखेर विधि र नियम पूरा नगरी अधिवेशन भो भनेर घोषणा गर्दैमा हुन्छ ? यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन ।’
पूर्वमहामन्त्री सिंहले नियम उल्लंघन गरेर पार्टी नेतृत्वले सधैं कार्यकर्तालाई अन्याय गरेको बताए । आफू कांग्रेसमा शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अभियानमा रहेको भन्दै उनले अब आसन्न महाधिवेशनमा राजनीतिक न्याय दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सभापतिले विधि प्रक्रियाविपरीत हुने गरी काम गर्दा आफूले डटेर सामना गर्ने गरेको पनि सिंहको भनाइ थियो।